Nahazo fanendrena Oscar nahagaga i Amazon | Vaovao momba ny gadget
Nahazo fanendrena Oscar nahagaga i Amazon
Efa eo amin'ny vanim-potoana streaming ve isika? Tsy handà izahay fa any Espana dia misy dingana vitsy foana ao ambadik'io karazana haitao io isika. Indrindra, raha toa ka ny sarimihetsika Netflix na Amazon no voatendry ho Goya, dia azo atao ny manao gala eo anelanelan'ny mpisehatra Espaniola sy ny talen'ny resaka iraisam-pirenena mampiahiahy mitsikera ny serivisy ho an'ny famonoana olona sy ny tsindry oligarchika. Ankoatra ny sangisangy, tsy maintsy lazaintsika avy amin'ny Actualidad Gadget ny fahombiazana tsy mahazatra izay afaka manamarika ny taloha sy aorian'ny fomba fahitantsika sinema, I Amazon no serivisy streaming voalohany notendrena ho Oscar.
Tsy afaka mamantatra ny kalitaon'ny sarimihetsika isika, izany no ilàna ny Akademia. Na izany aza, tsy maintsy hamafisiko fa faly aho manoratra ireo andalana ireo. Ny ivon-kevitry ny kalitaon'ny toetr'andro dia tsy ao Hollywood intsony. Nahazo valisoa i Amazon noho izany izay tsy isalasalana fa hampirisika ireo orinasa streaming hafa hamorona atiny.
Araka ny fantatrao tsara, Amazon, Netflix ary ankehitriny Movistar dia miloka be amin'ny famoronana votoaty tany am-boalohany, vokatr'ity andiany lehibe ity toa ny Narcos, ny Stranger Things ary ny House of Cards dia nipoitra tao amin'ny Netflix, noho ny ampahany natolotry ny Amazon antsika Mangarahara, ankoatry ny ohatra maro hafa.
Ny 26 febroary no ho Oscar Oscar, manondro inona ny zava-drehetra Manchester amoron-dranomasina tsy izy no ho mpandresy amin'ilay sarimihetsika tsara indrindraSaingy ny fisian'izy ireo any dia efa nilaza betsaka momba ny haben'ny izao tontolo izao sy ny fomba fahitantsika ny sarimihetsika izay novaina. Dingana iray izay ho sarotra ny manafoana azy, ary izany dia tokony hampihorohoro ny monopolista an'ity orinasa ity any amin'ny firenena toa an'i Espana, izay ifantohan'ny famokarana nasionaly amin'ny olona vitsivitsy, izay manapa-kevitra hoe iza no miasa sy manao ahoana ny fomba fiasan'izy ireo. Fotoana hiarahabana an'i Amazon tamin'ny asany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Nahazo fanendrena Oscar nahagaga i Amazon